Keenyaa, Yugaandaa fi Tanzaaniyaan duula farra oduu sobaa eegalan - BBC News Afaan Oromoo
Keenyaa, Yugaandaa fi Tanzaaniyaan duula farra oduu sobaa eegalan
Goodayyaa suuraa Pirezidaanti Keeniyaataan seerri haaraan qaamolee yakka karaa interneetii raawwatan kan ittiin adaban ta'uu dubbatan
Seerri haaraan Keenyaan baaste akka Baha Afriikaatti seera tibbana qaamolee oduu sobaa tamsaasan adabuuf ba'eedha. Namoota yakka akkanaa raawwatan jabeessanii akkaataa adabuun danda'amurratti ba'e seerri kun.
Akkaataa seera haaraa kanaan namni odeeffannoo dogoggoraa maxxanse maallaqa hanga doolaara ameerkaa kuma 50 ykn hidhaa waggaa lamaan adabama.
Seerri kompiyuutaratti garmalee fayyadamuu fi yakka gowwoomsaa ykn Cybercrimes dhorku nama miidiyaa hawaasummaarratti seeramaleessummaa agarsiisuuf mirga namootaa itti yaadee sarbu ni adaba.
Keeyaa, Yugaandaa fi Taanzaaniyaa keessatti seera odeessa sobaarratti ba'e kana kan qeeqan kun miidiyaa of danda'anii jiran luugamuuf yaadameeti jedhu.
Koreen mirga gaazexeessitootaaf dhaabbate Pirezidaanti Uhuruu Keeniyaataan seera haaraa ba'e keessatti gaaleewwan walabummaa pireesii fi mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu sarban akka sirrataniif wiixinee seerichaa paarlaamaaf akka ergan akeekkachiiseera.
Seerri kun qaamolee seeraan ala odeeffannoo baasanis ta'e argatan akka adabu akkasumas eegumsa taasifamuu qabu akka irraa mulqu ni kaa'a.
Akka yaada waldaa Gulaaltota Keenyaatti aanga'oonni seera haaraa ba'etti seeraan ala fayyadamuun walabummaa subquunnamtii sarbuu danda'u.
Seerri kun maaliif ba'e?
Pirezidaanti Keeniyaataan ibsa baasan keessatti seerri miidiyaa haaraan kan ba'eef tarkaanfii seeraa qaamolee odeessaalee sobaa karaa interneetii dabarsan, gocha quunnamtii saalaa daa'immanii tamsaasan, gowwoomsaa karaa kompiyuutaraa raawwatanii fi eenyummaa sobaatiin namoota karaa interneetii yakka raawwatan irratti fudhachuuf ta'uu ibsaniiru.
Seerichi nama eenyummaansaa osoo hin beekamin kara seeeramaleessaan sirna kompiyuutaraa fayyadamuun dhimma biyyaa fi diinagdee biyyaarratti yaaddoo ta'an keessatti hirmaatu hanga doolaara kuma 100 ykn hidhaa ji'a shaniitiin ni adaba.
Bitootessa darbe miseensonni paarlaamaa Keenyaa dhimma yakka karaa kompiyuutaraa raawwatamurratti wayita mariyatan namoonni hedduun miidiyaa hawaasummaa dhuunfaasaaniirratti suuraa adda baasuuf nama rakkisu fayyadamuun yakka raawwatu, kaan ammoo maqaa keenyaan miidiyaa hawaasummaarra taa'anii waan fedhan balleessu jechuun komatanii turan.
Qeeqxonni maal jedhu?
Yuunivarsitii Barmiingihaam kan UKtti argamu keessatti pirofeesara dimokiraasii kan ta'an Niik Chiizmaan tarkaanfiin oduu sobaarratti seera baasuu kun duubasaatii ajandaa biraa qaba jedhu.
''Sodaa guddaatu jira. Akkuma kanaan dura seera farra shororkaa jedhamuun mootummaan dhiibbaa uumee aangoo cimsachaa ture sana ta'uu mala'' jedhan.
Qeeqxonni biroon ammoo seerri haaraan kun kanaan dura namoota miidiyaadhaan aanga'oota badii balleessan qeeqan ittiin adabaa turaniin walfakkaata jedhu. Seerri kun kan ittiin biloogaroota aanga'oota mootummaatiin waan hin jaallatamneef qofa hidhamaa turanirraa adda miti jedhu.
Goodayyaa suuraa Miidiyaan Keenyaa seerri kun kan ittiin isaan luugamuuf ba'e akka ta'e dubbatu
Keenyaa keessatti biloogaroonni deggertoota baayyee waan qabaniif waan guddaa hojjetu. Filannoo Keenyaa yeroo darbeerrattillee ga'ee olaanaa taphataniiru. Maqaa gaarii ''loltoota Kiiboordii'' jedhus argataniiru.
Taanzaaniyaa keessatti maaltu ta'aa jira?
Kan Taanzaaniyaas kan Keenyaarraa baayyee adda miti, mootummaan Taanzaaniyaa namoonni miidiyaa hawaasummaarratti qabiyyee barbaadan dabarsuuf doolaara Ameerkaa 920 kaffaluu akka qabu murteessee ture. Mootummaan tarkaanfii akkanaa kan fudhatuuf Baha Afriikaa sobarraa bilisa gochuuf jedha, qeeqxonni garuu miidiyaa afaan cufuuf ittiin jedhu.
Goodayyaa suuraa Pirezidaanti Joon Magufuulii seera biloogaroota kaffalchiisu deggeran
Hamiin taaksii Yugaandaawoo laata?
Pirezidaantiin Yugaandaa Yuweerii Museveenii taaksii miidiyaa hawaasummaarra kaa'uuf turan akka turu kan murteessan erga Miniteerri maallaqaa biyyattii hojiirra oolmaa taaksichaarratti marii barbaachisa jedheeti.
Obbo Museveeniin feesbuukii fi WhatsApp fayyadamuuf taaksiin akka kaffalamuu qabu wiixinee yaadaa dhiyeessanii turan, kunis hamii gama kanaan biyyattii keessa ture ni hambisa jedhanii yaadu
Goodayyaa suuraa Pirezidaanti Museveeniin miidiyaa hawaasummaa fayyadamuuf taaksiin kaffalamuu akka qabu wiixineessan
Obbo Museveeniin marii dhiyeenya dhimma miidiyaa hawaasummaarratti taa'amerratti odeessaalee kamuu tamsaasuun dura dhugummaasaanii mirkaneeffachuun dirqama ta'uu akeekkachiisan.
Yugaandaan feesbuukii fi Tuwiitarii mataashee akka qabaattuuf karoorfachuus beeksisaniiru